बसमा यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ? अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय! - Bichar news - Nepali Online News Portal
बसमा यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ? अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय!
मुख्य खबर, रोचक, समाचार, स्वास्थ्य
काठमाडौं। सवारी साधन खासगरि बसमा यात्रा गर्दा रिँगटा लाग्ने र बान्ता हुने समस्या धेरै मानिसहरुको हुने गर्छ। कतिपय मानिस त झन् बान्ता भएकै कारण बिरामी समेत हुन्छन्।
कोही मानिसमा यात्रामा निस्कन साथ बान्ता गर्न थाल्छन् भने कसैकसैलाई लामो यात्रा गर्दा यो समस्या देखा पर्छ। बान्ता हुनु आफैँमा एक कष्टकर क्षण हो।
शरीरलाई कमजोर बनाउनुका साथै यस्तो समस्याले यात्राको रमाइलोपन समेत हराएर जान्छ तर यो समस्याको पनि समाधान छ।
यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रीयहरु आँखा, कान आदिले सन्तुलित ढंगबाट आ–आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा मोसन सिकनेस अर्थात यात्राजन्य वान्ता उत्पन्न हुन्छ। मोसन सिकनेस पनि व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ। तर यो समस्यालाई घरेलु उपायबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रै घर भान्सामा प्रयोग हुने केही प्रभावकारी घरेलु उपाय र औषधीय गुणयुक्त जडिबुटी जसले बान्ता हुनबाट बचाउँछ।
१. जेठीमधु स् यो मधुर र स्निग्ध गुणयुक्त हुने भएकोले आमाशयको अम्लता कम गर्दछ साथै आमाशयको वायुलाई पनि कम गर्दछ। अतः यात्रा गर्दा जेठीमधुका टुक्राहरु मुखमा राखेर चुसीरहनु पर्दछ।
२.ल्वाङ्ग स् ल्वाङ्ग मुखमा राखेर चुसीरहँदा पनि धेरैलाई बान्ताको समस्या समाधान भएको छ।
३. जामुन स् जामुनको फल तथा यसका पातहरुमा वान्ता रोक्न सक्ने औषधीय गुण हुन्छ। अतः जामुन पत्रको रस निकालेर यात्रा गर्नुपूर्व पिउने वा यात्राको बीचमा अलि–अलि रस पिउँदा पनि बान्ता हुँदैन। साथै जामुनको फल नै फलफूलका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
४.आँप स् काँचो आँपले खानामा रुची लगाउँछ, खाना पचाउन सहयोग गर्दछ। त्यही आँपको पातले बान्ता रोक्ने काम गर्दछ। यसर्थ यात्रा गर्दा आँपको पातको रस निकालेर बीचमा पिउने गर्नुपर्दछ।
५. सौंफ स् सौंफले पनि वान्ता रोक्ने काम गर्दछ। यात्राका क्रममा मुखमा सौंफ राखेर चपाईरहँदा पनि वान्ता हुँदैन।
६.अदुवा स् रुघा खोकी, अरुची आदिमा प्रयोग गरिने तथा दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने अदुवामा वान्ता रोक्ने औषधीय गुण हुन्छ। अतः यात्राका क्रममा अदुवाका टुक्रा मुखमा राखेर चुसीरहँदा पनि मोसन सिकनेस कम हुन्छ। यसैगरी फलफूलका रुपमा प्रयोग हुने दाडिम (अमिलो अनार), बयर, बिमिरो आदि यात्राका क्रममा पटक–पटक खाँदा पनि ‘मोसन सिकनेस’ कम गर्न सकिन्छ।
७. उत्सुकता स् कायम राख्ने यात्राका बेला अब के आउँला कस्तो ठाउँ आउला भनेर बाहिरी वातावरण नियालेको खण्डमा पनि बान्ता आउँदैन । बान्ता हुने व्यक्तिले जहिल्यै पनि अगाडी हेर्नुपर्छ ।
८.बान्ता धेरै हुनेले नाईटोमा हेण्डिप्लास्टलाई क्रस बनाएर लगाउँदा पनि सहज भएको अनुभव सुनाएका छन्।
९.कतिपयलाई भोको पेटमा वाकवाकी लाग्ने भएकोले यात्राको दौरानमा पेटभरी खाएर हिँड्नुपर्छ भने कतिपयलाई एकदमै हलुका खानेकुरा मात्रै खानुपर्छ।
१०. सवारीको गन्ध, सवारीले फालेको धुँवाको कारण पनि वाकवाकी लाग्ने कारणले चुईगम, हाजमोला, क्याण्डि, हल्स, अमिलीर पाउँ जस्ता कुरा मुखमा राख्न सकिन्छ भने मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ।
११.कतिपयले यात्राका दौरान अध्ययनका लागि किताबमा हेरिरहँदा पनि बान्ता आउने, रिँगटा लाग्ने भएको अनुभव सुनाएका छन्। यसकारण सकभर यात्रामा अध्ययन गर्नु राम्रो होईन।
१२. मन परेको गितहरुलाई बजाएर सुन्ने, गफगाफ गर्ने, बाहिरी वातावरणसँग रमाउने हो भने यस्ताखाले समस्या आउँदैन।
अथवा माथि भनिएका मध्ये मौसम अनुसार काँचो आँप वा दाडिम जे उपलब्ध हुन्छ त्यही लिई त्यसको जुस बनाउने र उक्त जुसमा पुदिना, अदुवा, ल्वाङ्ग मिसाएर अलिकति नुन र सौंफको पाउडर पनि राखी यात्राका क्रममा पटक–पटक पानीका रुपमा प्रयोग गर्दा पनि मोसन सिकनेसलाई कम गर्न सकिन्छ। एजेन्सी
- २ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:४० मा प्रकाशित